Inona avy ireo torolàlana momba ny sakafo 5? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Torolàlana momba ny sakafo kafe - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Torolàlana momba ny sakafo kafe - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Inona avy ireo torolàlana momba ny sakafo 5?
Adiresin'ny antontan-taratasyDIMYLEHIBEtorolalana: 1) araho salamamihinanalamina manerana ny androm-piainany, 2) mifantoka amin'ny karazany, ny hakitroky ny otrikaina ary ny habetsany, 3) mametra kaloria avy amin'ny siramamy nampiana sy tavy mahavoky ary mampihena ny fihinanana sodium, 4) mifindra amin'ny safidy sakafo sy zava-pisotro mahasalama kokoa, ary5) manohana salamamihinana...
Mila hery be ny vatantsika hampandehanana antsika isan'andro. Ary fantatrao ve hoe avy aiza no ahazoantsika izany angovo izany? Marina izany avy amin'ny sakafo nohaninay! Ary ny karazan'olona rehetra dia mankafy karazana sakafo isan-karazany.
Na pasta na nectarines, tortillas na tofu no tena tianao indrindra, ny ankamaroan'ny sakafo dia manana ny ilain'ny vatantsika ho salama. Mety efa fantatrao fa afaka mizara karazana sakafo isan-karazany amin'ny vondrona samihafa isika. Antsoinay hoe ireo vondrona sakafo ireo! Fa andao hojerentsika ny vondrona tsirairay dia ho hitantsika izay karazan-tsakafo mandeha any! Andao atomboka amin'ny vondrona voankazo.
Tokony ho tianao ny voankazo mamy sy matsiro! Ity vondrona ity dia misy zavatra toy ny paoma sy poars, voasary ary frezy. Ny voankazo vaovao dia tsara indrindra fa misy voankazo am-bifotsy na mangatsiaka ihany koa. Rehefa dinihina tokoa, voankazo maro no sarotra hita amin'ny ririnina ary ny voankazo sasany maniry ihany any amin'ny faritra sasany amin'izao tontolo izao.
Fa aza hadino ny momba ny voankazo maina! Voaloboka maina! Ary plum dia plum maina! Ary na ny ranom-boankazo aza dia an'ny vondrona voankazo, fa raha tsy ranom-boankazo fotsiny izy nefa tsy misy siramamy fanampiny. Manaraka izany ny vondrona voa. Ny voam-bary dia zavamaniry toy ny oaka, varimbazaha ary orza; ireo zavamaniry na zavamaniry serealy hafa dia eto.
Izany hoe, ny zavatra vita amin'ny lafarinina toy ny mofo sy paty, ny sakafo maraina toy ny oatmeal, ary na ny vary aza dia an'ity vondrona ity. Manaraka izany dia ny filokana vondrona veggie efa hitanao izay mitranga eto! Ny legioma dia avy amin'ny zavamaniry ihany koa - fa tsy toy ny voam-bary, na ny fakany, na ny fotony, na ny ravina zavamaniry sasany izay azontsika hanina! Ny karaoty, ohatra, dia ny fakany volomboasary mamy amin'ny karaoty. Ny lohan'ny salady dia ravina marihitra vitsivitsy fotsiny.
Ary ny asparagus dia fototry ny zavamaniry asparagus matsiro tokoa! Betsaka ny karazana legioma ka azontsika atao tsara ny mamaky an'ity vondrona ity ho vondrona kely kokoa. Ohatra, misy legioma maintso maitso toy ny epinara. Ny legioma starchy toy ny ovy sy ovy dia avy eo manana legioma mena sy voasary toy ny betet sy carrot mba hotononina vitsivitsy.
Inona avy ireo sakafo hafa azonao eritreretina? Ahoana ny amin'ny entana ao anaty sandwich anao? Ny hena, toy ny akoho na hamburger, dia an'ny vondrona proteinina, ary toy izany koa ny trondro toy ny tuna sy atody, izay masaka mba hanandrana! Saingy tsy ny mpikambana rehetra ao amin'ity vondrona ity dia avy amin'ny biby. Ny sakafo hafa toy ny tsaramaso, dibera ary tofu, izay vita amin'ny soja, dia feno proteinina, noho izany dia mpirehareha ao amin'ny vondrona proteinina koa izy ireo. Ary noho izany izahay dia mijanona amin'ny vondrona farany, vokatra vita amin'ny ronono.
Raha sakafo avy amin'ny rononon'omby na ronono soja, amin'ny vondrona ronono dia zavatra toy ny yaourt sy karazana fromazy rehetra, ary koa ny ronono vera mahazatra anao. Ary fantatrao fa inona koa no mety ao amin'io vondrona io? Gilasy! Fa izany dia mampatsiahy ahy, ny mamy mamy toy ny vatomamy, tsy tafiditra ao anatin'ny vondrona misy anay; izany dia satria siramamy ny ankamaroany ary tsy misy ireo zavatra ilain'ny vatantsika hijanona ho salama. Ka tsy maninona ny mankafy an'ireny sakafo ireny indraindray fa tsy matetika.
Mieritreritra ve ianao fa afaka mametraka sakafo ao anaty vondrona marina ankehitriny? Andao haka quiz sakafo matsiro ary ho hitantsika fa mahafantatra tsara ireo vondrona sakafo! Hanomboka amin'ny silaka mananasy isika. Vondrona iza no heverinao fa anisany? Squeaks hoy ny vondrona voankazo. Squeaks tsara! Eny, ny mananasy dia ao anatin'ny vondrona voankazo.
Ary ahoana ilay atody nandrahoina? Iza amin'ireo vondrona araka ny eritreritrao no mifanaraka aminy? Marina izany, ny vondrona proteinina. Ny atody dia loharanom-proteinina tsara. Ity misy iray hafa.
Hofaranantsika amin'ny sakafo iray mifanaraka amin'ny vondrona roa ny lalao ataontsika: makaroni sy fromazy. Andao hojerentsika tsirairay ny ampahany tsirairay. Ny makaroni sy ny fromazy dia mandeha tsara amin'ny vondrona ronono satria vita amin'ny ronono izy io.
Fa ahoana kosa ny paty makaroni? Fantatsika teo aloha fa ny paty dia vita amin'ny lafarinina vita amin'ny voamadinika. Midika izany fa an'ny makaroni dia an'ny vondrona voa! Ny fromazy dia misy sakafo an'ny vondrona ronono sy ny serealy. Phew! Nahatonga ahy ho noana daholo ireo tombantombana rehetra ireo! Hey Squeak s! Ndao hisakafo tsakitsaky! Ary tadidio fa amin'ny manaraka ianao noana ary mandeha any amin'ny pantry na vata fampangatsiahana misafidiana zavatra salama ary jereo ny vondrona sahaza ny sakafonao! Misaotra anao nanatevin-daharana ny SciShow Kids dia eo.
Misy zavatra tianao ho fantatra bebe kokoa ve? Mangataha fanampiana avy amin'ny olon-dehibe iray ary ampahafantaro anay ireo hevitra etsy ambany na handefa mailaka anay amin'ny ankizy@thescishow.com! Ary hahita anao amin'ny manaraka!
Inona avy ireo torolàlana momba ny sakafo atolotra any Etazonia?
Ny fomba fihinana mahasalama dia misy:
Voamaina, farafahakeliny ny antsasaky ny voamadinika manontolo. Ronono tsy misy tavy na matavy ambany, ao anatin'izany ny ronono, yaorta, fromazy ary / na zava-pisotro soja voatanisa. Karazan-tsakafo proteinina isan-karazany, ao anatin'izany ny hazan-dranomasina, hena mahia ary akoho amam-borona, atody, legume (tsaramaso sy pitipoà), ary voanjo, voa, ary vokatra soja.
Tratry ny taona vaovao daholo! ny torolàlana momba ny sakafo vaovao USDA dia navotsotra ary miteraka resabe hatrany izany. Manaiky tanteraka ny sasany amin'ireo fanambarana aho ary tsy mitovy hevitra amin'ny hafa. Ho anao izay tsy mipetraka any Etazonia, ny torolàlana USDA no tolo-kevitra momba ny sakafo ofisialy ho an'ny Amerikanina.
Ka andeha hojerentsika hoe iza avy ireo sakafo atoro azy ireo ary iza no tsy anisany, ary inona no dikan'izany ho antsika rehetra. Ny zavatra iray asongadin'izy ireo dia ny fifantohana amin'ny fomba fisakafoanana, tsy momba ny sakafon-kanina, tsy misy sakafo tokana hisy fiatraikany na hanapotika ny sakafonao, fa momba ny lamina ankapobeny. “Mihinana voankazo sy legioma vaovao be dia be ve ianao?” Fanontaniana tena lehibe kokoa noho ny hoe mihinana kale na voa sesame manokana ianao.
Raha ny marina dia mampiseho fomba fisakafoanana mahasalama telo ohatra izy ireo: omnivore, Mediteraneana ary vegetarian. Tsy natao hanaronana ny safidy rehetra izy ireo, mba hanehoana fotsiny ny fahalalahana fa misy làlana marobe ao anatin'ny fitsipiky ny fihinanana sakafo mahasalama. Eny, inona avy ireo fitsipika ireo? Nitanisa vondrona sakafo enina tokony hifantohanao izy ireo ary efatra tokony hoferanao.
Ny enina ankafizina dia voankazo sy legioma, tsy mahagaga satria tokony handrafitra ny antsasaky ny loviao izy ireo. Ka ny salanisa amerikana mihinana etsy ambony na ambanin'ny farany ambany raha oharina amin'ny tolo-kevitra. Voankazo, saika 80% ny Amerikanina tsy mihinana voankazo ampy.
Legioma, efa ho 90% ny olona no tsy misakafo ampy. legioma maitso, legioma volomboasary, legume, legioma starchy, na inona na inona, ny zava-drehetra dia tsy lanin'ny be loatra. Aleo atrehana, ny legioma atosiky ny Amerikanina fotsiny dia ny ovy sy voatabia.
Ny vondrona sakafo atolotra manaraka dia ny voam-bary, ary farafahakeliny ny voany dia masomboly manontolo. Mety hahagaga anao maro izany. ny antsasaky ny voa dia azo diovina? ary ekeko fa avo ny feony, na dia mahatratra ny ankamaroan'ny mofo, vary fotsy, paty sns aza izany.
Ny zavatra hafa tokony ho fantatrao dia ireo torolàlana ireo dia tsy mifantoka amin'ny sakafo ara-dalàna tonga lafatra. Mahatsiravina ny fihinanana antonony. Ankehitriny, an-tserasera, misy an'ity Internet an-tserasera iray manontolo ity fa matavy sy marary ny Amerikanina satria mitohy ny fahazoana manome torolàlana ny voamaina, fa ny tena marina dia ny ankamaroan'ny olona mihinana voa voadio sy voamadinika feno tsy lanin'ny be loatra.
Saika tsy misy mahatratra ny tolo-kevitra, mora kokoa ny mahita unicorn noho ny amerikanina izay mihinana voamadinika feno. Mazava tsara ny famaritanao azy: Hatramin'ny nipoitra voalohany ny torolàlana 40 taona lasa izay, ny Amerikanina dia nihemotra lavitra tao ambadiky ny tolo-kevitra, ary ny sakafon'ny hena mena sy siramamy ary voamaina voadio (amin'ny ankapobeny ny sakafo amerikanina mahazatra) dia misy vokany manimba . Tsy fanboy marina amin'ny torolàlana USDA aho, araka ny ho hitanao, tsy mitovy hevitra amin'ny maro aho, fa ny Amerikanina mihinana junk be loatra, tsy fampahalalam-baovao velively izany. ny marina dia, raha manaraka ny torolàlana momba ny voamaina izy ireo dia tena fanatsarana tokoa izany.
Mety hanontany ianao izao, raha tsy raharahan'ny olona fotsiny izy ireo, inona no fototr'ireo torolàlana ireo? ary izany dia fanontaniana ara-drariny, saingy misy fiantraikany amin'ny fandaharan'asan'ny governemanta maro toy ny sakafo atoandro any an-tsekoly ary izy ireo no loharanom-pahalalana ho an'ireo matihanina amin'ny fahasalamana manerana ny firenena, noho izany dia misy dikany lehibe izy ireo. Eny ary, ny vondrona sakafo manaraka izay aroson'izy ireo dia ny vokatra vita amin'ny ronono ary tena mampiady hevitra hatrany io ary nesorin'i Canada tamim-pahalalana ireo vokatra vita amin'ny ronono tamin'ny torolàlana nasionaly farany nataony ary nanomboka nilaza tamin'ny olona izy fa misotro rano indrindra. Tamin'ity taona ity dia nanontany ahy ny olona tao amin'ny media sosialy raha mieritreritra aho fa te hanao toy izany koa i Etazonia, dia tsy mino aho, ary azo inoana fa tsy nanao izany izy ireo.
Ny toerana misy ahy dia ny tokony hilazantsika ny marina amin'ny olona, ​​hanazavana ny lafy tsara sy ny lafy ratsy, ary avelao izy ireo hanapa-kevitra. Ny olana lehibe amin'ny adihevitra momba ny ronono dia ny etika amin'ny fomba itondrana ny biby sy fanariana azy ireo amin'ny indostrian'ny ronono ary ekeko tanteraka fa olana goavana io ary mieritreritra aho fa tokony haseho ny olona ny famokarana azy, fa izaho koa Mieritrereta ka tokony hizara ny zava-mahadomelina amin'ny olona am-pahamendrehana isika. Ny fomba fisakafoanana mahasalama dia mety misy na tsy misy vokatra vita amin'ny ronono.
Safidy io. miankina amin'ny anton-javatra toy ny fandeferana lactose, ny karazany, ny habetsaky ny zavatra hohanina sns., ny filazàna amin'ny olona fa misy poizina ny vokatra vita amin'ny ronono isaky ny hitantsika indraindray amin'ny Internet fa tsy tena hita taratra ny vatan'ny porofo, fa na Any amin'ny farany mahery, milaza fa ilaina ny vokatra vita amin'ny ronono ary rehefa tsy manana izany ianao, sahirana ve ianao, ary mandeha lavitra loatra amin'io lalana faharoa io ireo toro lalana ireo.
fomba fanaovana pataloha bisikileta
Izy ireo dia mampiseho ny vokatra vita amin'ny ronono ho toy ny vondrona sakafo manan-danja fa tsy safidy ankoatry ny hafa. Nilaza mihitsy aza izy ireo hoe: 'Ny fahazarana misakafo mahasalama dia misy vokatra vita amin'ny ronono
Inona avy ireo torolàlana momba ny sakafo 2015 ka hatramin'ny 2020?
ny2015.Torolàlana momba ny sakafo 2020dia natao hanampiana ny Amerikanina hihinana sakafo mahasalama kokoalevitra. Natao ho an'ny mpanao politika sy ny matihanina amin'ny fahasalamana, ity fanontana nyTorolàlana momba ny sakafomamaritra ny fomba ahafahan'ny olona manatsara ny fomba fihinan'izy ireo amin'ny ankapobeny ny fitambarana sakafo sy zava-pisotro ao aminylevitra.
Andiam-pitsipika vaovao momba ny sakafo no navotsotra ary raharaha lehibe izany, ka anio isika hiresaka momba izay ao anatiny sy ny dikan'izany ho anao sy izaho, governemanta amerikana isaky ny dimy taona ary nanomboka nanao izany izy ireo tamin'ny 1980. Eny ireo mazava ho somary tara kely satria tsy 2015 intsony, fa mbola nahavita ihany izy ireo ary hitondra antsika handroso izany mandra-pahazoan'izy ireo torolàlana vaovao amin'ny taona 2020. Ary ataon'izy ireo izany isaky ny dimy taona hahafahan'izy ireo mijery zavatra, fahalalana vaovao mety efa nivoaka, ary koa ireo antony hafa misy fiantraikany amin'ny tondrozotra, ary avy eo manao fanitsiana arak'izay ilaina.
Ankehitriny, amin'ny ankapobeny, ny torolàlana dia tsy miova firy. Midika izany fa mihinana voankazo sy legioma izy io. Ity dia zavatra lehibe iray izay tena tsy mitovy hevitra ny olona, ​​fa misy kosa ny nuansa sy ny zavatra hafa izay niova nandritra ny taona maro, ary tamin'ity taona ity dia nisy fanovana natao tamin'ireo tondrozotra.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao momba ireo torolàlana ireo dia ny nandrakofan'izy ireo ny lohahevitra ankapobeny amin'ny fijerena ireo fomba fihinanan-tsakafo amin'ny ankapobeny, fa tsy ny fifantohana amin'ny sakafo manokana na ny otrikaina manokana. Ary misy faritra roa maromaro izay tena miresaka momba an'io hevitra io ny torolàlana. Tany am-piandohana dia nilaza izy ireo hoe: 'Na dia maro aza ny tolo-kevitr'izy ireo dia nijanona ho tsy miova arakaraka ny fandehan'ny fotoana, dia nitombo ny torolàlana momba ny sakafo ary nitombo ny fahalalana ara-tsiansa.
Ireo fandrosoana ireo dia nahafahana nahafantatra tsara kokoa, ary nifantoka bebe kokoa tamin'ny, ny maha-zava-dehibe ny fahazarana misakafo ara-pahasalamana sy ny fomba fiasan'ny sakafo sy ny zava-pisotro mifamatotra amin'ny fahasalamana. Noho izany, ny fomba fihinanana sakafo mahasalama dia ifantohan'ny torolàlana momba ny sakafo 2015-2020. 'Ary heveriko fa raharaha lehibe io satria efa niresaka imbetsaka teto aho fa tsy sakafo fotsiny na otrikaina.
Momba ny fomba fiasa miaraka amin'ireo zavatra rehetra ireo ary misy ifandraisany. Ny fahitan'izy ireo an'io fomba io dia dingana lehibe tokoa amin'ny làlana tsara, raha ny hevitro. Hoy koa izy ireo: 'Ny olona tsy mihinana sakafo sy otrikaina mitokana, fa raha atambatra, ary io fitambarana io dia mamorona fomba fihinanan'ny rehetra.' Ary misy teny nindramina hafa izay niresahan'izy ireo momba izany tao amin'ny torolàlana, saingy amin'ny ankapobeny, tena faly aho fa nandray an'io fomba io izy ireo satria heveriko fa izany no tokony hataontsika rehetra rehefa mijery ny sakafontsika Izahay mijery ary manandrana manova dia. hijerena ny sakafonay manontolo ary hieritreritra ny fomba fiasan'ireo zavatra rehetra ireo, fa tsy sakafo mahery na otrikaina, satria rehefa atokanao ireo zavatra ireo dia miafara amin'ny toe-javatra iray izay mety ho tsara na ho ratsy ny sakafo tsirairay satria ny sakafo rehetra dia manana fifangaroana otrikaina hafa ary afaka mivarotra na inona na inona sakafo ianao na mametraka sakafo ao ambanin'ilay sokajy sakafo ratsy mifototra amin'ny fomba fijery raisinao fotsiny.
Raha ny fiovana dia niova izy ireo satria nanary ny fatran'ny kolesterola. Ary zavatra nandrasana izany. Betsaka ny resaka momba an'io rehefa nanao tolo-kevitra izy ireo, ary zavatra heveriko fa mety izany.
Nametraka fetra miligrama an-jatony isan'andro ho an'ny kolesterola izy ireo, ka atody roa sy kely kokoa izany, ary izany dia zavatra heveriko fa fiovana tsara satria misy porofo fa ny kolesterola amin'ny sakafo dia tsy misy fiantraikany amin'ny kolesterola amin'ny ra, afa-tsy angamba amin'ny olona manana génétique na tantaram-pianakaviana manokana dia mety ho voakasik'izany saingy tsy dia misy fiatraikany lehibe izany ary betsaka ny sakafo kolesterola avo salama any izay miorina amin'ny eritreritra teo aloha Ireo izay manana kolesterola dia nahazo ratsy nanimba ny rap. Noho izany, ny zavatra toy ny atody sy ny makamba dia be kolesterola tokoa, saingy sakafo ara-pahasalamana tena lehibe tokoa izy ireo mba hampidirina amin'ny sakafonao. Ankehitriny, mandritra an'ity fanoratana ity dia manao fanamarihana vitsivitsy izy ireo, toy ny ampahan'ny fitantarana ny fizarana amin'ny torolalana izay ilazany zavatra toy izany, saingy fantatrao fa tsy mila kolesterola ianao ka tsy tokony hihinana azy na inona na inona hitako fa karazana hafahafa satria saika mifanohitra kely izany, fa farafaharatsiny izy ireo dia mizotra mankany amin'ny fanesorana ny fetra mazava ao amin'ny tolo-kevitra ary nampian'izy ireo atody koa ny lisitry ny sakafo mahasalama izay tokony ho ampahany amin'ny sakafo ara-pahasalamana ka heveriko fa izany dia amin'ny lafiny rehetra fampandrosoana tsara.
Ny zavatra iray hafa izay novan'izy ireo dia ny fatrany siramamy ampiana ankehitriny. Ka nanoro hevitra izy ireo fa tsy latsaky ny 10% ny kaloria avy amin'ny siramamy nampiana. Ka tsy toy ny siramamy hitanao amin'ny voankazo io, fa ny siramamy izay ampiana zavatra.
Noho izany eritrereto ny fomba nanampian'ny soda siramamy na mofomamy na vatomamy, na sakafo sasany aza izay tsy voaangona 'mahasalama' toy ny bar ary zavatra feno siramamy fanampiny tsy mifanohitra amin'ny siramamy voajanahary amin'ny zavatra toy ny voankazo na ronono. Ary ny tena marina dia heveriko fa somary tsy nampoizina ihany ny tsy nanarahana ireo torolàlana teo aloha, fa farafaharatsiny mahatonga azy io any izao satria fantatray fa ny siramamy ampiana dia tsy zavatra manome otrikaina taonina ho an'ny vatana. Fantatrao fa mihinana gliosida sy kaloria ianao, nefa matetika tsy misy vitamina na mineraly hafa, tsy toy ny siramamy avy amin'ny zavatra toy ny voankazo, satria rehefa mihinana paoma ianao dia tsy mahazo ny siramamy fotsiny, fa mahazo ireo zavatra hafa rehetra ananan'ny paoma ao anatiny.
Ary antony iray hafa mahafinaritra ny mahita azy ireo mandray ity dingana ity satria manondro ny zava-misy fa ny sakafo tena izy dia miha tsara kokoa ho anao. Tsara kokoa ny mihinana voankazo iray noho ny karazana bara na tsakitsaky misy siramamy nampiana. Ny zava-dehibe iray hafa momba ireo torolàlana ireo, izay somary mampiady hevitra, dia ny fitazonan'izy ireo ny tolo-kevitra fa latsaky ny 10% ny kaloria tokony ho avy amin'ny tavy tototry.
Ary mampiady hevitra izany satria be ny resaka tato ho ato momba ny hoe matavy be tokoa ve no tena ratsy. Raha ny marina, rehefa noforonina ireo torolàlana ireo, ny Academy of Nutrition and Dietetics dia nanao ny heviny na ny tolo-keviny, ary ny Academy dia fikambanana lehibe indrindra ho an'ireo mpanao sakafo. Ianao nilaza, fantatrao, ny zavatra matavy tototra, tsy maintsy jerentsika izany.
Mety tsy ho otrikaina mampiahiahy intsony izy io, toy ny zavatra kolesterola iray manontolo ary zavatra mila fikarohana fanampiny izany. Ka mahaliana ny mahita fa nanaraka ilay tolo-kevitra izy ireo. Nanontany tena ny olona momba an'io, saingy raha ny marina, tsy dia gaga aho noho ny antony maro.
Voalohany indrindra, tena tsy misy marimaritra iraisana eo amin'ny fiarahamonina ara-pahasalamana momba an'io olana matavy be rehetra io. Ny tiako holazaina dia, misy olona maro toa ahy izay tena tsy mino fa raharaha lehibe izany fa ampahany amin'ny sakafo ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny ary hita ao anaty sakafo mahasalama sy mahavelona aza, saingy misy betsaka ny olona manao an'izany no tohizany ary milaza fa tsy dia tsara loatra izany. Ary ny siansa sasany dia mampiseho fa raha soloinao gliosida ny tavy tototry ny vatanao dia azo antoka fa tsy mahazo vokatra tsara ianao, fa angamba raha soloinao tavy tsy masaka dia misy vokany tsara izany, fa ny olona amin'ny ankapobeny dia tena tsy manaiky, ka tsy mahagaga fa nanapa-kevitra ny hitazona izany amin'ny toerana misy azy ireo izy ireo.
Ary mila dinihintsika ihany koa fa ny Amerikanina antonony, loharanon-tavy matavy be, dia sakafo tsy mahasalama amin'ny ankapobeny. Zava-boahary vita amin'ny menaka sy namboarina ary koa hena sy ronono, vokatra biby izay tsy nobeazina araka ny tokony ho izy. Ny biby izay notezaina tamin'ny ahitra, mihinana sakafo mety aminy, ary miaina amin'ny tontolo mahasalama amin'ny ankapobeny dia hanana tavy tsara kalitao kokoa.
Ary tena tsy mitovy amin'ny tavy amin'ny biby fiompiana any amin'ny toeram-piompiana. Ny fandinihana izany dia ho an'ny amerikanina antonony ary ny ankamaroan'ny olona dia mbola tsy mahazo matavy biby fiompiana avo lenta, ity dia mety ho tolo-kevitra tsara satria ho an'ny olona antonony izay tsy mihinana hena mahazatra fotsiny dia mety ho tiako ny hiarahan'izy ireo manapaka kely ihany koa satria Ny tavy dia faritra iray ahitàna ny junkies be dia be amin'ny biby sy antsika, saingy tsy dia tsara amin'ny ankapobeny ihany koa satria ny mombamomba ny asidra matavy dia samy hafa sy ny karazan-javatra rehetra. Raha ao an-tsaina izany dia misy dikany ihany koa ny famelana ny tolo-kevitra araka ny maha-izy azy.
Ka amin'ny ankapobeny, faly be aho tamin'ireto toro-hevitra ireto. Heveriko fa manondro fomba fisakafoanana mahasalama tokoa izy ireo. Ny tolo-kevitra momba ny ronono sy fromazy ambany tavy sy matavy ambany ary hena mahia fotsiny, tsy adala aho satria tsy olona matavy be anti-satiety aho, saingy azoko hoe avy aiza izy ireo ary amin'ny ankapobeny tsy. hevero fa io no zavatra lehibe indrindra.
Rehefa mijery ireo torolàlana ireo amin'ny ankapobeny isika dia matanjaka tsara amin'ny ankapobeny. Ankehitriny dia zava-dehibe ny mahatadidy ny tanjon'ireo torolàlana ireo. Izy ireo dia tsy natao hanomezana tolo-kevitra momba ny fahasalamana amin'ny olon-tsotra.
Tena eo ianao handray fanapahan-kevitra politika. Ka rehefa miresaka labozia na sakafo atoandro an-tsekoly, toy ny famoahana ofisialin'ny governemanta momba ny sakafo ara-tsakafo, dia ampiasain'izy ireo ho toy ny fototry ny zavatra hafa rehetra ireo. Ka izany no tena ilana azy, ary koa ho an'ireo olona toa ahy, mpitsabo ara-pahasalamana, ny mijery sy mijery izay atolony.
Ka zavatra tokony ho fantatry ny olona antonony tsara izany, saingy azo antoka fa tsy tolo-kevitra ho ANAO satria tsy mitovy ny olona rehetra. Ny olon-drehetra, fantatrao, dia samy manana ny azy manokana momba ny fomba fiainany, ny toe-pahasalamany ary ny karazan-javatra rehetra. Ary ireo torolàlana ireo dia tsy manova ny tolo-kevitro ho an'ny salama salama.
Voalohany, satria tsy dia samy hafa amin'ny zavatra noresahintsika teo aloha izy ireo, fa koa satria mbola mihinana sakafo tena izy. Io no fototry ny zava-drehetra, ary ny fananganana an'izany dia misy hatrany ny fiovaovan'ny tsirairay, fa raha manomboka amin'ny tena sakafo manontolo ianao ary avy eo mandroso dia mety eo amin'ny lala-mahitsy ianao. Ary raha te hijery akaiky ireo torolàlana ho anao ianao dia hampifandraisiko eto ambany ilay rakitra feno.
Afaka mankany ianao amin'izay. Misy sary sy zavatra mahafinaritra momba ny tolo-kevitra sy izay ataon'ny Amerikanina antonony ary ny karazan-javatra toy izany. Ka raha liana hianatra bebe kokoa ianao dia eto no azonao aleha.
Io no resahina ao amin'ny Torolàlana momba ny sakafo 2015. Raha manana fanontaniana hafa tianao hovaliako ianao dia aza hadino ny mametraka azy ireo amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany ary raha vaovao amin'ny fantsonao ianao ary mila fampahalalana bebe kokoa momba ny sakafo ara-pahasalamana sy ny fampahalalana momba ny sakafo ary ny fomba fahandro mahasalama, misoratra anarana amin'ny fantsoko, satria ny fihinanana sakafo mahasalama sy ny fananana fomba fiaina mahasalama dia tsy tokony ho sarotra ary tiako haseho anao ny fomba fiasa. Ary raha tianao ny fampahalalana maimaim-poana eto fa hitanao fa mila zavatra manokana bebe kokoa ianao dia aza adino fa manolotra fotoana iray manokana aho.
Ka raha mahaliana an'ity ianao dia ampahafantaro ahy ary afaka manangana izany ho anao izahay. Misaotra nijery, manantena aho fa nanana andro mahafinaritra ianao ary hiresaka aminao amin'ny manaraka!
Inona ny tolo-kevitry ny isa momba ny torolàlana momba ny sakafo 2020 2025 ho an'ny Amerikanina momba ny tavy matavy?
Matavy vokyLatsaky ny 10 isan-jaton'ny kaloria isan'andro manomboka amin'ny taona 2. misotro ny ankizy latsaky ny 14 taona, na misotro antonony amin'ny famerana ny fisotroana zava-pisotro 2 na latsaky ny iray andro ho an'ny lehilahySYMisotro 1 na latsaky ny iray andro ho an'ny vehivavy, rehefa mihinana toaka.
Manantena aho indray andro any fa hiverina eo afovoany isika ary afaka mahita anao mivantana daholo. Horaisiko amin'ity volana janoary ity fa ho hitanao amin'ny volana martsa, ka mankafy ny Volana Nasionalin'ny fanjarian-tsakafo.
Martsa ity. Toy izany hatrany hatramin'ny 1980 rehefa nanapa-kevitra ny hampiasa an'io fomba io izy ireo hahitana ny maha-zava-dehibe ny sakafo ara-pahasalamana. Ho an'i Hypocrisy dia nilaza tamin'ny taonjato faha-5 talohan'i JK 'Avelao ny sakafonao ho fanafody' ary izany no ezahan'ny Volam-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo! Ny 10 martsa tamin'ity taona ity no andro fisoratana anarana nasionaly.
Ka avelao aho hilaza aminao kely momba ny hoe iza no Dietitianina misoratra anarana. Betsaka ny olona manontany ahy hoe: 'Inona no atao hoe mpahay sakafo? Inona no atao hoe mpahay sakafo? 'Eny, raha ny tiana holazaina, ny mpahay sakafo voasoratra anarana dia mpahay sakafo iray izay nampiofanina hanaraka ny fenitry ny traikefa henjana momba ny fanabeazana CDR - izany dia zavatra fanamarinana avy amin'ny American Academy of Nutrition and Dietetics - ilay manaikitra lehibe.
Fa ny dikan'izany dia, raha mahita olona manana RD amin'ny anarany ianao, farafaharatsiny manana BS amin'ny dietetika, Um, nanao fiofanana arahi-maso izy ireo, mazàna manodidina ny sivy volana, ary voatery nipetraka sy nandray ary ilay Passing national fanadinana - sarotra - ny fisoratana anarana. Ary avy eo rehefa manohy ny asany amin'ny maha-mpamatsy sakafo izy ireo dia mila manohy ny fianarany. Ka rehefa mahita mpitsabo ara-tsakafo ianao dia fantatrao fa manana izany filàna manokana amin'ny fanabeazana sy fahalalana izany izy ireo.
Ka ny mpahay sakafo rehetra dia mpamatsy sakafo iray. Raha ny marina, ny Akademia izao dia namela ireo olona izay niantso ny RD ho lasa RDN, Dietitians voasoratra anarana. Tsy ny mpahay sakafo rehetra no mpamatsy sakafo voasoratra anarana.
Azonao atao ny mandeha any am-pianarana mba hanao ny Masters in Nutrition, azonao atao ny manantona shingles aorian'ny fampianarana an-tserasera ary miantso ny tenanao ho mpihinana sakafo. Ka rehefa mitsidika mpahay sakafo iray dia tena zava-dehibe tokoa ny manamarina ny fianarany sy ny fahalalany satria ho fantatrao fa tsy voafehy izany satria manana sakafo ara-dalàna ny fisakafoanana manana izany fanampiana izany. Azonao atao ny mandeha any amin'ny eatright.org, izay tranokala momba ny sakafo sy ny sakafon'ny Akademia.
Afaka mahita fampahalalana marobe eto ianao. Afaka mianatra zavatra betsaka momba ny dietitians voasoratra anarana ianao ary mahita iray eo akaikinao afa-tsy izaho raha te hahita olona indray andro any. Um so ary amin'ny farany dia manana ny lisitr'ireo tranonkala rehetra lazaiko ireo izahay.
Ka aza manahy ny amin'ny fanoratana azy ireo. Amin'ny maha-mpisafo sakafo voasoratra anarana ahy dia nieritreritra aho hoe: inona no azoko horesahina aminao amin'ity volana ity, Volana National Nutrition? Inona no azoko aseho anao? 'Miezaka mampahafantatra anao aho momba ny lohahevitra mahaliana ny olona ary ny vintana dia ny namoahan'ny governemanta ny torolàlana momba ny sakafo ho an'ny Amerikanina tamin'ny volana Janoary. eh, mahafinaritra be izany satria izao misy zavatra holazaiko anao.
Dimy taona izay ary avoaka isaky ny dimy taona izy ireo. Ka ireo ny torolàlana ho an'ny 2020-2025. Afaka mandeha any amin'ny dietaryguidelines.gov ianao ary misintona ny zavatra rehetra.
Lava! Azonao atao ny mangataka brochure, fa raha COVID dia mety mila fotoana kely vao halefa any aminao io brochure io. Fa na izany aza, ny zavatra mahafinaritra momba ny torolàlana momba ny sakafo dia izao no taona voalohany ary efa hatramin'ny 1980 izy ireo, noho izany ny volana nasionaly momba ny sakafo, ny torolàlana momba ny sakafo 1980 dia volana tsara. Tena nanambady aho tamin'ny 1980, ka taona tsara, tsara, tiako holazaina.
Na izany na tsy izany, sambany tamin'ity taona ity, ny torolàlana momba ny sakafo dia nanova azy io ho tolo-kevitry ny fiainana. Fahita tamin'ny ankapobeny fotsiny izao dia mifantoka amin'ny dingana rehetra amin'ny fiainana izy ireo. Ka tsara ho antsika olon-dehibe izany, 60 plus hoy izy ireo rehefa olon-dehibe.
Samy hafa ny fepetra takiana aminay. Mila kalsioma betsaka kokoa noho ny ankizy kely isika. Mila proteinina bebe kokoa isika, proteinina avo lenta.
Tsy mandray tsara ny B12 izahay. Tsy misotro be loatra isika indraindray satria tsy mandeha tsara toy izany ny fahatsapana fa mangetaheta. Hitondra izany rehetra izany ianao ary tena milay.
Ka raha mandeha foana ianao dia afaka mankany amin'ny pejy 121 rehefa miditra. Eo no manomboka ny olon-dehibe. Ary koa, ho hitan'izy ireo izany - tsy ho hitanao izany, fa tehirizo fotsiny - hiteny aminao hitady azy, tabilao io.
Betsaka izany. Fa rehefa miteny ianao fa manana kaloria 2 000 dia izay no fenitra ho an'ny marika momba ny sakafo rehetra. Lazain'izy ireo aminao legioma kaopy roa sy sasany ary avy eo ao anaty legioma misy fahatapahana: anana maitso, tsaramaso mena sy voasary, legioma starchy, firy ny voankazo, voankazo roa kaopy.
Izy rehetra dia manome anao tolo-kevitra mitovy amin'ny sakafo DASH vantany vao vitanao izany ary fenoy ny takelaka fanarahana izay ahafahanao manisy tsipika ny boaty kelinao amin'ny isan'ny vondrona sakafo rehetra nohaninao. Tena mahasoa tokoa izany satria matetika ny olona miteny hoe tsy haiko ny hohanina na, fantatrareo fa tsy haiko fotsiny. Ka toro lalana tsara izany.
Ka izy ireo, raha azo lazaina, ny teny ambongadin'ireto torolàlana momba ny sakafo ireto: 'Ny isa rehetra dia manisa' ary ny anton'izany dia ny 85 isan-jaton'ny nohanintsika dia tsy maintsy sakafo manankarena. Tsy maintsy mahafeno ny fepetra takianay izany, raha tsy izany dia tsy hahazo izay ilainao ianao. Ary misy 15% sisa tavela amin'ny siramamy fanampiny, tavy tototry ary alikaola.
Tsy be izany. Kaloria 300 eo ho eo izany rehefa 2.000 kaloria ianao. Ka tena zava-dehibe tokoa ny manisa ny manaikitra rehetra.
Ka nesoriko avy tao amin'ilay torolalana ireo lesona manan-danja telo. Araka ny efa nolazaiko dia mety ho rakitra PDF 160 pejy io. Noho izany, avy amin'ireo torolàlana, misy zavatra manan-danja telo mipoitra - IRAY: Miezaha hanome izay ilain'ny sakafo amin'ny alàlan'ny sakafo sy zava-pisotro.
Raha mihinana sakafo mangatsiaka sy mihinana pilina ianao dia tsy ho ampy ny famenon-tsakafo vitaminina iray. Ary ny zavatra momba ny fanampin-tsakafo dia matetika misy fanampin-tsakafo tena tsara any, tsy misy orinasa lehibe any. Um, fantatrao fa tsy fehezin'ny FDA izy ireo.
Azonao atao ny milaza fa manana an'io vola io ao amin'ny famenonay izahay, mety manana izy ireo, angamba tsy manana izy ireo. Mety voaloton'ny metaly mavesatra sy zavatra hafa izay tsy tsara ianao. Afaka mifandray amin'ny fanafody hafa ananantsika koa izy ireo.
Zava-dehibe noho izany ny firesahana amin'ny dokotera sy ny farmasinao raha mihinana famenon-tsakafo ianao. Fa ny lakileny dia ny fiezahana haka ny sakafo mahavelona anao amin'ny otrikaina ao anaty sakafo. Nankany amin'ny oniversite aho tamin'ny taona 70.
Tsy fantatray ny momba ny antioxidant. Tsy fantatray ny microbiome, ny zavatra rehetra resahin'izy ireo ankehitriny. Ny vitamina dia hita tamin'ny 1921.
Fantatrao àry fa ny sakafo dia mety mbola misy zavatra tsy fantatsika, ary tena zava-dehibe ny fihinananao ireo sakafo ireo satria miara-miasa tsara kokoa izy ireo noho ny mitoka-monina zavatra amin'ny famenon-tsakafo. ROA: no safidy ao anatin'ny vondrona sakafo tsirairay. Tadidinao ve ilay legioma izay nanana safidy dimy hafa? Satria ny sakafo samihafa, na dia ao anatin'ny vondrona sakafo iray aza, dia manome otrikaina samihafa.
Ka raha zavatra samihafa no azonao, alao antoka fa azonao daholo izany. Ka manahirana anao aho: raha mbola tsy nanandrana karazana legioma sasany ianao, manandrama zava-baovao ao amin'ny magazay fivarotana akaiky indrindra - sarontava sy azo antoka. Misafidiana zavatra tianao, inona eto an-tany izany! Angamba ianao hanandrana an'ity.
Zava-dehibe ny fiezahantsika manampy karazana sakafo. Ny zavatra fahatelo dia ny mijery ny haben'ny ampahany. Mahazo an'io foana aho.
Ka raha misakafo matetika any ivelany ianao na dia mety tsy dia be loatra aza ny COVID dia ento miaraka aminao ireo sakafo voahodina. Fantatrao fa ny haben'ny ampahany dia tsy tokony hohaninay. Ary fantatrareo izany.
Fantatrao, rehefa lasa tany amin'ny trano fisakafoanana ianao, dia nilaza foana izahay fa nozarainao ny fanombohana ary ampiasao ny antsasaky ny fako alohan'ny hanombohanao hisakafo akory. Ary zavatra toy izany. Um, tsy haiko, fantatrao ny fotoana hanalana zavatra, ataonao an-trano izany? Tsy haiko, fa tena zava-dehibe ny fiomanana amin'ny haben'ny ampahany tokony hanananao.
Ity tabilao ity, ity tracker ity, dia hanampy anao betsaka koa. Eny ary, ny tondrozotra momba ny sakafo dia nanolotra tolo-kevitra maromaro. Ireo zavatra ratsy rehetra, hoy izy ireo, dia tsy mihoatra ny 10% ny kaloria ho an'ny siramamy fanampiny.
Raha nahita ny famelabelarana nataoko ianao ary antenaina fa mbola misy sy azo jerena dia hahazo eny aho. Koa miverena mijery ny fampisehoana amin'ny siramamy nampiana. Manantena aho fa hanampy anao izany.
Menaka mahavoky: Mampidina ny 10% -n'ny kaloria anananao izy ireo amin'ny tavy mahavoky. Raha sakafon'ny zavamaniry ianao, dia mety tsy olana lehibe izany, satria ny hena feno hena no tena hita amin'ny vokatra hena sy biby. Ny tolo-kevitra hafa dia ny famerana ny sodium ho latsaka ny 2.300 milligrams.
Efa nijery ny atin'ny sodium misy ny sakafo tianao ve ianao? Fast food? Ho toa an'Andriamanitro ianao! Heveriko fa izany no ampahany sarotra indrindra ho an'ny Amerikanina: ny famerana ny sosainao satria manafika sy mandeha amin'ny toerana rehetra. Tena mila ezaka izany. Ny zavatra farany tohan'izy ireo dia ny alikaola.
Raha tsy misotro ianao dia aza manomboka misotro. Na izany aza, raha manao izany ianao, dia manome soso-kevitra fisotro roa ho an'ny lehilahy ary iray ho an'ny vehivavy. Um, ahoana no ampifanarahanay amin'ireo zavatra rehetra fantatrao ireo rehefa mijery ireo torolàlana momba ny sakafo ianao ary mamaky ireo pejy rehetra ary misy fampahalalana marobe any.
Safidy iray ny misafidy 'selectmyplate.gov'. Mbola eo amin'ny slide farany ihany io.
Ary raiso ny quiz. Ny zavatra hitranga amin'izao fotoana izao dia ny 'manaova quiz'. Ataovy izany! Amin'ny fahatsorana rehetra, tsy afaka milaza aminao aho hoe isaky ny inona aho no miasa any amin'ny hopitaly na mandeha mijery olona ary hoy izy ireo, 'Oh, ianao no mpahay sakafo' ary notenenin'izy ireo tamiko ny fomba fihinanan-kanina fotsiny satria tsara loatra aho satria naniry izaho handre izay noheverin'izy ireo fa ho reko.; Zava-dehibe ny quiz.
Valio marina izany. Ny fomba fihinananao tokoa, ny fandraisanao fanapahan-kevitra, satria amin'ny farany dia homena tolo-kevitra ianao mba hanovana zavatra, hanatsarana na izay tokony hatao tsara. Izy io dia tena quiz mahafinaritra, ary avy eo manana rindranasa azonao zahana izy ireo.
Antsoina hoe Start Simple With My Plate izy io ary fampiharana izany. ary na dia tsy zavatra lehibe amin'ny findaiko aza aho, fa azonao atao ny misintona azy amin'ny findainao amin'ny Google Play na amin'ny app Apple ary misintona ity Start Simple for My Plate ity ary hanampy anao hametraka tanjona kendrenao manokana ny sakafo isan'andro. . Ary avy eo dia dinihintsika amin'ny fotoana tena izy ary fantatr'izy ireo fa tena nanandrana azy aho ary isan'andro dia mahazo bing kely avy amin'izy ireo aho satria tsy vitako mihitsy.
Vitao izany. Atsangano io dia hanampy anao hanaraka izay nohaninao sy hahafantaranao fa manome ahy tolo-kevitra momba ny fomba fahandro amin'ny karazan-javatra rehetra ianao. Maimaimpoana ary izany no zavatra mahafinaritra momba azy.
Um, ary fantatrao ny badge ny karazan-javatra mahafinaritra rehetra. Ka raha olona mazoto ianao dia zavatra mahafinaritra tokoa izany. Um, farafaharatsiny izany no tiako hampahafantarina anao.
Iray volana indray ny volana martsa ary faly! Tadidio izay nohaninao. Ataovy tonga saina ny tenanao dia mirary soa fa tsy mora izany. Saingy azonao atao ary raha mila miresaka amiko manokana momba ny sakafonao sy ny zavatra ataonao ianao, ny adiresy mailaka ary koa ny findaiko teknolojia dia eo amin'ny faran'ity takelaka ity.
Azonao atao ny mandefa hafatra amiko ary afaka manao fotoana virtoaly amin'ny telefaona izahay ary afaka miresaka kely ianao. Maimaimpoana daholo ary fantatrao izay tokony hatao tsara kokoa. Isika rehetra dia afaka manatsara fa na dia dingana kely iray aza, na firy taona ianao na firy, dia afaka manisy fiovana lehibe amin'ny fahatsapanao sy ny fahasalamanao.
Mirary soa ary mirary volana fanjarian-tsakafo mahafinaritra!
Inona ny fitsipika 5% 20%?
Na dia tsy fitsapana farany aza dia fomba iray haingana hamakiana ny isan-jato isan-jato isan-jato ny fampiasana ny5/Fitsipika 20. Milaza izany fa raha ny% DV dia kely noho ny5% misy ambany ny fatran'ity otrikaina ity, raha toa kosa ny% DV lehibe noho izyroa-polo amby% dia misy habetsahan'ity otrikaina ity.
Inona avy ireo vondrona sakafo 5?
Araka ny asehon'ny kisary MyPlate, nyvondrona sakafo dimydia Voankazo, legioma, voamaina, proteininaENTANA NOVOKARINA, ary ronono.
Inona avy ireo torolàlana momba ny sakafo?
nyTorolàlana momba ny sakafo ho an'nyManome torohevitra momba izay hohanina sy hosotroina ny Amerikanina mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny otrikaina, hampiroborobo ny fahasalamana ary hisorohana ny aretina. Izy io dia novolavolaina sy nosoratana ho an'ny mpihaino matihanina, ao anatin'izany ireo mpanao politika, mpamatsy fahasalamana, mpanabe ara-tsakafo ary mpiasan'ny programa federaly.
Inona ny teny filamatr'ireo torolàlana momba ny sakafo 2020-2025?
nyteny filamatraho an'nyToro-làlana momba ny sakafo 2020-2025ho an'ny Amerikanina, Ataovy ny isa isaky ny manaikitra, dia mampiseho ny maha-zava-dehibe an'io zavatra iolevitra.
Inona avy ireo hevi-dehibe tokony hotadidina amin'ny torolàlana 2020-2025?
Misy 4 mihoatraGuidelinesao amin'ny2020-2025fanontana: Araho ny fomba fihinanana sakafo mahasalama isaky ny vanim-potoana. Ataovy miavaka ary ankafizo ny safidinao amin'ny sakafo sy zava-pisotro misy alikaola hanehoana ny safidinao manokana, ny fomban-drazana ara-kolotsaina ary ny fiheverana ny tetibola.
Inona no vaovao ao amin'ny Torolàlana momba ny sakafo Just Out 2020-2025?
Ity fanontana ity dia manana fiantsoana hanao zavatra: Ataovy ny isa isaky ny manaikitraTorolàlana momba ny sakafo. nyTorolàlana momba ny sakafo,2020-2025mifantoka amin'ny fisafidianana sakafo mahasalama sy zava-pisotro manankarena amin'ny otrikaina ary mijanona ao anatin'ny fatran'ny kaloria anananao. Izay no mahatonga nyTorolàlana momba ny sakafomiantso ny amerikanina rehetra hanao ny isa isaky ny manaikitra!
Firy ny kaopy kafe tokony hosotroinao isan'andro?
Ny kafe antonony dia mazàna faritana ho 3-5 kaopy isan'andro, na salan'isa 400 mg ny kafeina, araka ny Torolàlana ho an'ny Amerikanina. Ny kafe dia fifangaroana be pitsiny misy akora simika arivo mahery. 
Firy ny kafeina kafeina tokony ananan'ny olon-dehibe iray ao anatin'ny iray andro?
Torolàlana momba ny fihinanana kafeinina. Tamin'ny taona 2015 ny Eoropeana misahana ny sakafo ara-tsakafo (EFSA) dia namoaka ny heviny ara-tsiansa momba ny fiarovana ny kafeinina, nanoro hevitra fa ny fidiran'ny kafeinina avy amin'ny loharano rehetra hatramin'ny 400 mg isan'andro ary ny fatra tokana an'ny 200mg dia tsy miteraka ahiahy ho an'ny olon-dehibe amin'ny vahoaka 4. .
Inona avy ireo torolàlana EFSA momba ny fihinanana kafeinina?
Torolàlana momba ny fihinanana kafeinina. Nanoro hevitra ihany koa ny EFSA fa ny doka tokana misy kafeinina 100mg dia mety hampitombo ny faharetan'ny torimaso ary hampihena ny faharetan'ny torimaso amin'ny olon-dehibe sasany, indrindra rehefa lanina akaiky ny hatory 4. Efa ela no nanaiky fa ny vehivavy bevohoka dia tokony hampandefitra ny fihinanana kafeinina ao aminy.